ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်တွင် sildenafil ၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထား - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုကာလအတွင်း medial preoptic inရိယာနှင့် dopamine နှင့် serotonin အပြောင်းအလဲများနှင့်နျူကလိယ (လိင်မှုနှိုးဆွမှုကာလအတွင်းတိုးများလာခြင်း) - Your Brain On Porn
ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်တွင် sildenafil ၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက်စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထား - medial preoptic inရိယာ၌ dopamine နှင့် serotonin ပြောင်းလဲမှုများနှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကာလအတွင်းနျူကလိယ accumbens (၂၀၁၃)
မှတ်ချက်များ - Viagra သည်ဆုချီးမြှင့်စင်တာနှင့် hypothalamus တွင် dopamine ကိုတိုးစေနိုင်သည်ဟုလေ့လာမှုကတွေ့ရှိခဲ့သည်။
J ကိုလိင် Med ။ 2013 Mar;10(3):719-29. doi: 10.1111/j.1743-6109.2012.03000.x.
Kyratsas ကို C, Dallas ကို C, Anderzhanova E ကို, Polissidis တစ်ဦးက, Kokras N ကို, Konstantinides K သည်, Papadopoulou-Daifoti Z ကို.
ဆေးဝါးဗေဒဦးစီးဌာန, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်း, အေသင်တက္ကသိုလ်, အေသင်, ဂရိ။
Sildenafil အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ပထမဦးဆုံးအထိရောက်ခံတွင်းကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ယင်း၏အရေးယူရံကြောင်းကိုလက်ခံသည်ပေမယ့်, အဲဒါကိုအထီးလိင်စိတ်နိုးထတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုဗဟိုအာရုံကြောလမ်းကြောင်းသြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ဒေသခံ sildenafil အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens (NACC) တွင် extracellular dopamine (DA) တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ sildenafil အုပ်ချုပ်ရေးလိင်စိတ်နိုးထတဲ့မော်ဒယ်စဉ်အတွင်း dopaminergic နှင့် NACC အတွက် serotonergic လှုပ်ရှားမှုနှင့် medial preoptic ဧရိယာ (mPOA) ပွောငျးလဲရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ခုစူးရှသော (2 ရက်ပေါင်း) သို့မဟုတ်နာတာရှည် (21 ရက်) sildenafil regimen (1 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) အထီးကြွက်မှ intraperitoneally အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သုံးဆယ်မိနစ်နောက်ဆုံး sildenafil ဆေးထိုးပြီးနောက်အားလုံးယောက်ျားတပိုင်တနိုင် estrous အမျိုးသမီး၏တင်ပြချက်အားဖြင့် noncontact စိုက်ထူအစည်းအဝေးများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သည်။ ယောက်ျား၏ထက်ဝက် noncontact လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံ၏ယခင်အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အခြားတစ်ဝက်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ထိတွေ့ခဲ့သည်။
DA နှင့်၎င်း၏ metabolites ၏တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်, 3,4-Dihydroxyphenylacetic အက်ဆစ် (DOPAC) နှင့် homovanillic အက်ဆစ် (HVA) အဖြစ် serotonin (5-HT) နှင့်၎င်း၏ metabolite 5-HIAA, high-performance ကိုအရည်နှင့်အတူ mPOA နှင့် NACC အတွက်တိုင်းတာခဲ့ကြသည် လြှပျစစျ detector နှင့်အတူ Chromatography ။ Dopamine ([DOPAC + HVA] / DA) နှင့် serotonin (5-HIAA / 5-HT) လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်လည်း neurotransmission ၏ညွှန်းကိန်းအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
nontrained အထီးခုနှစ်တွင်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည် sildenafil ကုသ mPOA နှင့် NACC အတွက် DA နှင့် 5-HT လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှုန်းထားများတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ နာတာရှည်ကုသမှုတိုးမြှင့်သော်လည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်များတွင်စူးရှသော sildenafil လည်း 5-HT လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်မှုနှုန်းသာသာ NACC အတွက် mPOA နှင့် DA လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှုန်းသည်အတွက်, နှစ်ဦးစလုံးအဆောက်အဦများအတွက် DA နှင့် 5-HT လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှုန်းထားများတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ sildenafil အဆိုပါ NACC အတွက် dopaminergic လှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းစေပါတယ်, အ mPOA ဤတွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့နှင့်ထို့ပြင်အပြင်ကဤဦးနှောက်ဒေသများတွင် serotonergic လှုပ်ရှားမှုအပေါ် sildenafil-သွေးဆောင်သက်ရောက်မှုထုတ်ဖေါ်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။ ထို့ကြောင့်, ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်လိင်စိတ်နိုးထများ၏ထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုဗဟိုအာရုံကြောလမ်းကြောင်းအပေါ် sildenafil တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထောကျပံ့။